Ungasithuthukisa Kanjani Izinga Lekhwalithi le-Google Adwords
NgoMgqibelo, Okthoba 6, 2012 NgoMgqibelo, ngoFebhuwari 4, 2017 Douglas Karr
Ezinye izinkampani zitshala isamba semali ku-Google Adwords kuphela ukuthola isabelomali sazo singasekho futhi alikho ibhizinisi elitholakele. Ngenkathi kubonakala phezulu ukuthi iGoogle Adwords imane nje yibhidi yohlelo oluphezulu, akunjalo. Kunezici eziningana ezinomthelela ekubekweni kwesikhangiso sakho - okuzothinta isabelomali sakho.
Kusuka ku-Infographic: Ungasithuthukisa kanjani Izikolo Zekhwalithi ze-Google Adwords nge-DigitalNetAgency: Isilinganiso sekhwalithi ye-Google isilinganiso sokuthi ikhasi lakho lokufika, amagama angukhiye, nezikhangiso zibaluleke kangakanani kwigama elingukhiye oqonde kulo kanye nabantu ababuka okuqukethwe kwakho, lapho isikhangiso sakho sizotholakala khona ekhasini, nokuthi i-Google ingakanani izokukhokhisela indawo yakho yesikhangiso. Lapha, sibhekisisa ama-Quality Scores futhi sixoxa ngokuthi ungalithuthukisa kanjani elakho.
Tags: i-adwordsamaphuzu wekhwalithi ye-adwordsi-google adwordsisilinganiso sekhwalithi ye-google adwordsukhokha ngokuchofoza ngokukodwappcizinga lekhwalithi
Umhlahlandlela Wokumaketha WaseReddit
I-Ecosystem of Lifecycle Marketing